ရွှေနိုင်ငံ: ရွှေတိဂုံစေတီတော်၏ အံ့ဖွယ် ၉ ပါး
ရွှေတိဂုံစေတီတော် အထက်ပစ္စယံ အေ၇ှ့ဘက်တည့်တည့်တွင်တည်ရှိသည်။ ထိုတ၀ဂူဘုရားသို့ အမျိုး သားများသာလျှင် တက်ရောက်ဖူးမြော်ခွင့်ရပြီး၊ အမျိုးသမီးများ မဖူးမြော်နိုင်သော ဘုရားဟုလည်း ဆို လျှင် မှားမည်မဟုတ်ပေ။ တ၀ဂူပတ္တမြားမျက်ရှင်ဘုရားဟုလည်းခေါ်တွင်လေသည်။ဆုတောင်းပြည့်တ၀ဂူု ဘုရား သည် အလွန်တန်ခိုးကြီးသည့်အတွက် ဆုတောင်းပြည့်သည်ဟု အလွန်ယုံကြည်ကြသည်။ ရှေး အခါက မင်းညီ မင်းသားများသည် တ၀ဂူဆုတောင်းပြည့် ဘုရားကို တက်ပြီးဆုတောင်း ဆုယူပြုလုပ်ကြ သည်။ သစ္စာအဓိဌာန်ပြု လုပ်ကြသည်။ ပြုလုပ်သည့်အတိုင်း အောင်မြင်ကြသည်။ အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ပြီး နန်းရပ်ထီးဖြူလုယူကြသည်။ ထီးနန်းအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ကြသည်။ သို့အတွက် အချင်းချင်း မသတ် ဖြတ်စေ ရန် ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် မင်းလုပ်စေရန်အတွက် မင်းညီမင်းသားများ တ၀ဂူဆုတောင်းပြည့်ဘုရား မဖူးမြော်ရ ဟု ဘုရင်များက အမိန့်စာချွန်တော်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရလေသည် ဟုမှတ်သားခဲ့ရဖူးပါသည်။ ထို့ကြောင့် တ၀ဂူ ဘုရားကို လူတိုင်းအလွယ်တကူ မဖူးမြော်နိုင်စေရန် ဆုမတောင်းနိုင်ကြစေရန် တ၀ဂူဘုရားကို အထက် ပစ္စယံ လူသူအရောက်အပေါက်နည်း သော နေရာတွင်လျှို့ဝှက် တည်ထား ကိုးကွယ်ကြသည်ဟု ပြောသ မှတ်ပြု ကြပါသည်။
ရွှေတိဂုံကုန်းတော် ရင်ပြင်တော် စနေထောင့်တည့်တည့်တွင် တည်ရှိသည်။ စေတီငယ်ပေါ်တွင် ဇော်ဂျီရုပ် များ ပြုလုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ လောကီပညာရပ် အစီအမံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ဘုရားဟု သိရှိ ရလေသည်။
ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော် တနင်္ဂနွေထောင့်ရှိ နောင်တော်ကြီး ဘုရားမြောင်ဘက် အာရုံခံတန်ဆောင်း (ရှင်မထီး တန်ဆောင်း) တွင်းရှိဘုရားဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀-ခန့်က ရှင်မထီးဆရာတော် တည်သွားသည့် ဟုပြောသည်။
(၅) ရှင်အဇ္ဖဂေါဏဘုရား (အံ့ဖွယ် ၅ --- ရှင်အဇ္ဖဂေါဏ နဲ.ရှင်မထီးဆရာတော် ကိုတော်၂များများက တစ်ပါးထဲလို. မှားတတ်ကြပါတယ်... ရှင်အဇ္ဖဂေါဏက ပုဂံပြည်ကိုပထမဆုံးစတည်ထောင်တဲ့ သမုဒ္ဒ ရာဇ်မင်း လက်ထက်မှာပေါ်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ပါ.... ရှင်မထီး ဆရာတော်ကတော့ ပျူစောထီးမင်းလက်ထက် မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ပါ.. အဂ္ဂိရိတ်သမားတွေအတွက်အလွန်အားထားရတဲ့ ရှင်မထီးကျမ်း ကိုပြုစု ခဲ့တဲ့သူပါ.)
ရွှေတိဂုံဘုရား ရင်ပြင်တော် တနင်္ဂနွေထောင့်ရှိ နောင်တော်ကြီး ဘုရား၏ တောင်ဘက်အာရုံခံတန်ဆောင်း တွင်းရုပ်ပွားတော်ဖြစ်သည်။ ရှင်အဇ္ဖဂေါဏကား ဆိတ်မျက်လုံးတစ်ဖက်၊ နွားမျက်လုံးတစ်ဖက် ရှိသော ကိုယ်တော် ဟု ထင်ရှားသည်။ အဂ္ဂိရပ်တန်ခိုးဖြင့် ပုဂံခေတ်က ရွှေမိုး ငွေမိုး ရွာအောင်စောင်မခဲ့သော ကိုယ်တော်ဟုလည်းေ၇ှးဟောင်းသမိုင်းစာပေတို့တွင် ဆို၏။ ဆရာတော်က ၄င်းတည်ခဲ့မှန်း လူများသိစေ ရန် မျက်လုံးတော်တစ်ဖက်ကျဉ်း၊ တစ်ဖက်ကျယ် ထုလုပ်သွားကြောင်းအဆိုရှိသည်။ ထိုအာရုံခံ တန်ဆောင်း ရာဟုထောင့် (၀ါ) အနောက်မြောက်ထောင့်ရှိ ရုပ်ပွါးတော်မှာ မျက်လုံးတော် တစ်ဖက်ကျဉ်း၊ တစ်ဖက် ကျယ် အရွယ်ချင်း မတူအောင်ပြုလုပ်ထားလေသည်။
ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော် မြောက်ဘက်တွင်ရှိသော ဆံတော်တွင်း တန်ဆောင်းအတွင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ဆံတောင် တွင်း တန်ဆောင်းမှာ ဒဂုံခင်ခင်လေး၏ ကောင်းမှုဖြစ်သော မဟာဗောဓိစေတီ၏ အနောက် ဘက် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် တည်ရှိသည်။ ရွှေတိဂုံစေတီကို တည်စဉ်က ဆံတော်များဆေးကြောသည့် တွင်းဖြစ်သည်ဟု မှတ်သားကြလေသည်။
ရွှေတိဂုံစေတီတော် အရှေ့မုခ် အနီးရှိ ဘိုးဘိုးအောင်တန်ဆောင်း ဘုရားပင်ဖြစ်သည်။ ထိုတန်ဆောင်း အတွင်း ရှိ ရုပ်ပွားတော်ကို ဘိုးဘိုးအောင် တည်ရစ်သည်ဟု ပြောစမှတ်ရှိသည်။ ဘိုးဘိုးအောင်တန်ေ ဆာင်း အနောက်ဘက်တွင် ကျောချင်းကပ်လျှက် ရှိသည်ကား ဓမ္မစေတီ၏ ကောင်းမှုတောင်စေ တီဖြစ် သည်။ ဓမ္မစေတီဘုရားရှေ့တွင် ခြင်္သေ့နှင့် ကျားရုပ်ရှိသည်။
(၈) လက်ပက်လက်ဘုရား (အံ့ဖွယ် ၈ - တနလာင်္ထောင့်မှာ ရှိပါတယ်.. .လာဘမုနိဘုရားလို. လဲခေါ်ပါ တယ်.. ကျန်းမာရေး ညံ့ရင် ထိုဘုရားမှာ ဆုတောင်းပါတဲ့)
ရွှေတိဂုံစေတီတော်အရှေ့မုခ် အာရုံခံတန်ဆောင်းအတွင်းတွင်ရှိ၏။ ကကုသန်ရုပ်ပွားတော်ဖြစ် သည်။ လိုဏ်အတွင်းရှိ ကကုသတ်ဘုရားရှင် ရုပ်ပွားတော်၏ လက်ယာဘက်လက်တော်မှာ အခြားဘုရားများ ထုစဉ်ကဲ့သို့ လက်မှောက်ခုံမဟုတ်ဘဲ လက်တော်ပက်လက်ထားပြီး ထုထားသဖြင့် လက်ပက်လက် ဘုရား ဟုခေါ်ဝေါ်လေ့ ရှိလေသည်။
ထို အံ့ဖွယ် ၉ ပါးအပြင် နေလ ဘုရား၊ ပိတုန်း ၂ ကောင်ကို တစ်ဖက်စီကိုင်ပြီ ဆုတောင်းရသော ဘုရား များလည်း ရှိသေးသည်။ ရွှေတိဂုံရောက်သည့်အခါ စုံအောင် ဖူးနိုင်ပါစေ။